Mac OS X ကို VirtualBox မှာ တငျပွီး သုံးလိုသူတှအေတှကျ (Latest OS X High Sierra) vmdk - Khit Minnyo
Windows Mac OS X ကို VirtualBox မှာ တငျပွီး သုံးလိုသူတှအေတှကျ (Latest OS X High Sierra) vmdk
Mac OS X ကို VirtualBox မှာ တငျပွီး သုံးလိုသူတှအေတှကျ (Latest OS X High Sierra) vmdk
by KhitMinnyo on August 12, 2018 in Hacking Lab, Kali, Windows
((( Sorry for my Zawgyi2009 Fonts )))
Unicode Version (မြန်မာစာ မမှန်ပါက အောက်ဆုံးသို့ ဆက်ဆင်းကြည့်ပါ။ Zawgyi Version ပါပါသည်။)
Windows, Linux တှမှော သုံးနိုငျပါသညျ။
သတိပွုရနျမှာ RAM 4GB သာရှိသော Laptop (PC) မြားတှငျ မသုံးသငျ့ပါ။
ပထမဆုံးအနဖွေငျ့ မိမိတို့ Windows (or) Linux တှငျ VirtualBox ကို Install ထားရပါမညျ။
install မလုပျရသေးသူမြား install ထားဖို့ လိုပါသညျ။
Windows & Other Platforms မြား အတှကျ VirtualBox Download link >> Click Here <<
Kali && Ubuntu မြားတှငျမူ
root@kmn:~# apt-get install virtualbox virtualbox-dkms -y
VirtualBox install ထားပွီးပါက
Mac OS X vmdk file ကို ဒီစာကွောငျးကို နှိပျပွီး ဒေါငျးနိုငျပါတယျ။
Size ကတော့ 6GB ထိရှိပါတယျခငျဗြာ။ (မူလတငျပေးသူကို လေးစားသောအားဖွငျ့ ဖိုငျနာမညျကိုတောငျမှ ပွောငျးမထားပါ)
ဒေါငျးလို့ ရလာတဲ့ rar file ကို ဖွညျခလြိုကျရငျ vmdk file ပါဝငျတဲ့ Folder တဈခုကို ရပါမယျ။ ဖွညျခလြိုကျတဲ့အခါ ရလာမယျ့ size က 9GB တောငျ ရှိတာမို့လို့ ဖွညျခြိနျ ကွာပါမယျ။ စိတျရှညျပါ။
ပွီးရငျတော့ VirtualBox ကိုဖှငျ့ပွီး New ကိုနှိပျကာ စတငျနိုငျပါပွီ။
VirtualBox မှာ တငျနညျးတှကေတော့ အထှအေထူး မပွောငျးလဲတာကွောငျ့ အဆငျပွမေယျ မြှျောလငျ့ပါတယျ။ New နဲ့ စတငျခြိနျမှာ ကိုယျပေးလိုကျမယျ့ နာမညျကိုတော့ အထူးသတိထားပါ။
အထကျပါပုံမှာ ကြှနျတျောက Mac OS X လို့ ပေးထားပါတယျ။ ပွီးရငျ Next ပေါ့။
ဒီအဆငျ့က RAM သတျမှတျပေးရမှာပါ။ 4GB လောကျ ပေးသငျ့တာဖွဈလို့မို့ RAM 4GB ပဲရှိတဲ့ ကှနျပြူတာတှမှော မသုံးသငျ့ကွောငျး ပွောပွခဲ့ခွငျးပါ။
ဒီအဆငျ့မှာတော့ အထကျပါပုံထဲကအတိုငျး Use an existing virtual hard disk file ဆိုတာကို ရှေးဖို့ လိုပါမယျ။ ပွီးရငျ အောကျက Folder ပုံ အဝါရောငျလေးကိုနှိပျပွီး ကြှနျတျောတို့ ဒေါငျးထားတဲ့ RAR ဖိုငျကို ဖွညျထားတဲ့ နရောထိသှားပွီး vmdk ဖိုငျကို ရှေးပေးလိုကျပါ။ အထကျပါပုံမှာ ကြှနျတျောရှေးပွထားပွီးသားကို မွငျနိုငျပါတယျ။ ပွီးရငျ Create နှိပျလိုကျပါ။
ခုဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Mac OS X ကို အထကျပါပုံအတိုငျး မွငျရပါပွီ။ Mac OS X ကို အထကျပါပုံအတိုငျး select လုပျထားပွီး settings ကို ထပျဝငျလိုကျပါ။
System နရောထဲဝငျပွီး Motherboard ခေါငျးစဉျအောကျက Base Memory နရောမှာ 4096MB ဖွဈ မဖွဈ ပွနျစဈပါ။ 1GB = 1024MB ပါ။
Precessor ဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျအောကျကို ဆကျသှားပွီး Precessor(s) နရောမှာ2လောကျထိ ပေးထားပါ။
Display Menu ထဲက Screen ခေါငျးစဉျအောကျမှာ Video Memory ဆိုတဲ့နရောမှာ 128 ထိ အကုနျသာ ပေးလိုကျပါ။ ပွီးသှားရငျ OK ကိုသာ နှိပျလိုကျ။ Start ကို လုံးဝ မလုပျပါနဲ့ဦး။
Mac OS X install ရာမှာ အဆငျပွစေဖေို့အတှကျ Terminal ကနေ ရိုကျထညျ့ရမယျ့ Command တှေ ရှိပါသေးတယျ။ Linux မှာဆိုရငျတော့ Terminal ပေါ့။ Windows သမားတှကေတော့ cmd ကနေ တဈဆငျ့စီ VirtualBox install ထားတဲ့ထဲထိ ဝငျထားဖို့ လိုပါမယျ။ Linux သမားတှတေော့ မလိုပါ။
Linux သုံးသူတှကေတော့ အောကျပါ စာကွောငျး တဈကွောငျးစီကို Terminal ဖှငျ့ပွီး ရိုကျထညျ့ပါ။
ရိုကျမထညျ့ရအောငျ ကူးထညျ့လို့ရအောငျ စီစဉျပေးထားပါတယျ။ ကူးထညျ့တာ ပိုမွနျပွီး ပိုမှနျတာပေါ့ 🙋😄😄 တကယျလို့မြား မိတျဆှကေ Mac OS X လို့ နာမညျမပေးခဲ့ဘူးဆိုရငျ ပွငျကို ပွငျကူးရမှာနျော။
မကျြတောငျ အဖှငျ့အပိတျထဲမှာ VirtualBox မှာ new လုပျခဲ့တုနျးက နာမညျအတိုငျး အကွီးအသေး နဲ့ space မှာ မလှဲအောငျ ပွောငျးထညျ့ရမယျနျော။
root@kmn:~# VBoxManage modifyvm "Mac OS X" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
root@kmn:~# VBoxManage setextradata "Mac OS X" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
root@kmn:~# VBoxManage setextradata "Mac OS X" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
root@kmn:~# VBoxManage setextradata "Mac OS X" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
root@kmn:~# VBoxManage setextradata "Mac OS X" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
root@kmn:~# VBoxManage setextradata "Mac OS X" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
ကူးထညျ့တဲ့အခါမှာလညျး မလိုတာတှပေါ ကူးမသှားကွနဲ့နျော။ # လုံးဝ မပါသှားစနေဲ့။ # နောကျကပဲ ကူးထညျ့ကွပါ။ အခြို့က အကုနျကူးတာ 😬😬
Virtual Box မှာ ဖနျတီးထားတဲ့ Mac OS X လေးကို Start နှိပျပွီး စတငျနိုငျပါပွီ။ ...........
Install လုပျတဲ့အဆငျ့တှကေတော့ လုံးဝ မခကျတာမို့လို့ ပုံတှမြေားပွီး loading ကွာမှာစိုးတဲ့အတှကျ ထညျ့မပွတော့ပါဘူးဗြာ။
အဆငျပွမေယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျ .........
Windows သမားတှအေတှကျလညျး command တှေ လိုပါတယျ။
ပုံတှနေဲ့ မပွတော့ဘူးနျော စာနဲ့ပဲ ပေးလိုကျပါမယျ။
ပထမဆုံး My computer (This PC) ကိုဖှငျ့ C:\_Program Files\_Oracle\_VirtualBox\_ ထိ အဆငျ့ဆငျ့ ဖှငျ့ဝငျထားပါ။ ပွီးရငျ လှတျတဲ့နရောမှာ Shift + R-click နှိပျပွီး open command windows here ထငျတယျ (မနေ့လေို့) အဲဒါနှိပျလိုကျတာနဲ့ cmd ပှငျ့လာပါမယျဗြာ။
ပှငျ့လာပွီဆိုတာနဲ့ အောကျပါအတိုငျး တဈကွောငျးစီသာ ထညျ့လိုကျပါ။ တဈကွောငျးနဲ့ တဈကွောငျးကွား ခြဲထားတဲ့အတှကျ အဆငျပွမေယျထငျတယျဗနြော .........
နောကျပွီး Your Virtual Machine Name ဆိုတဲ့နရောမှာလညျး VirtualBox မှာ တငျခဲ့တဲ့ နာမညျ ထညျ့ကွဦးဗနြော .........
အားလုံး ပြျောရှငျကွပါစခေငျဗြာ ..........
Windows, Linux တွေမှာ သုံးနိုင်ပါသည်။
သတိပြုရန်မှာ RAM 4GB သာရှိသော Laptop (PC) များတွင် မသုံးသင့်ပါ။
ပထမဆုံးအနေဖြင့် မိမိတို့ Windows (or) Linux တွင် VirtualBox ကို Install ထားရပါမည်။
install မလုပ်ရသေးသူများ install ထားဖို့ လိုပါသည်။
Windows & Other Platforms များ အတွက် VirtualBox Download link >> Click Here <<
Kali && Ubuntu များတွင်မူ
VirtualBox install ထားပြီးပါက
Mac OS X vmdk file ကို ဒီစာကြောင်းကို နှိပ်ပြီး ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်။
Size ကတော့ 6GB ထိရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ (မူလတင်ပေးသူကို လေးစားသောအားဖြင့် ဖိုင်နာမည်ကိုတောင်မှ ပြောင်းမထားပါ)
ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ rar file ကို ဖြည်ချလိုက်ရင် vmdk file ပါဝင်တဲ့ Folder တစ်ခုကို ရပါမယ်။ ဖြည်ချလိုက်တဲ့အခါ ရလာမယ့် size က 9GB တောင် ရှိတာမို့လို့ ဖြည်ချိန် ကြာပါမယ်။ စိတ်ရှည်ပါ။
ပြီးရင်တော့ VirtualBox ကိုဖွင့်ပြီး New ကိုနှိပ်ကာ စတင်နိုင်ပါပြီ။
VirtualBox မှာ တင်နည်းတွေကတော့ အထွေအထူး မပြောင်းလဲတာကြောင့် အဆင်ပြေမယ် မျှော်လင့်ပါတယ်။ New နဲ့ စတင်ချိန်မှာ ကိုယ်ပေးလိုက်မယ့် နာမည်ကိုတော့ အထူးသတိထားပါ။
အထက်ပါပုံမှာ ကျွန်တော်က Mac OS X လို့ ပေးထားပါတယ်။ ပြီးရင် Next ပေါ့။
ဒီအဆင့်က RAM သတ်မှတ်ပေးရမှာပါ။ 4GB လောက် ပေးသင့်တာဖြစ်လို့မို့ RAM 4GB ပဲရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ မသုံးသင့်ကြောင်း ပြောပြခဲ့ခြင်းပါ။
ဒီအဆင့်မှာတော့ အထက်ပါပုံထဲကအတိုင်း Use an existing virtual hard disk file ဆိုတာကို ရွေးဖို့ လိုပါမယ်။ ပြီးရင် အောက်က Folder ပုံ အဝါရောင်လေးကိုနှိပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဒေါင်းထားတဲ့ RAR ဖိုင်ကို ဖြည်ထားတဲ့ နေရာထိသွားပြီး vmdk ဖိုင်ကို ရွေးပေးလိုက်ပါ။ အထက်ပါပုံမှာ ကျွန်တော်ရွေးပြထားပြီးသားကို မြင်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် Create နှိပ်လိုက်ပါ။
ခုဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Mac OS X ကို အထက်ပါပုံအတိုင်း မြင်ရပါပြီ။ Mac OS X ကို အထက်ပါပုံအတိုင်း select လုပ်ထားပြီး settings ကို ထပ်ဝင်လိုက်ပါ။
System နေရာထဲဝင်ပြီး Motherboard ခေါင်းစဉ်အောက်က Base Memory နေရာမှာ 4096MB ဖြစ် မဖြစ် ပြန်စစ်ပါ။ 1GB = 1024MB ပါ။
Precessor ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်ကို ဆက်သွားပြီး Precessor(s) နေရာမှာ2လောက်ထိ ပေးထားပါ။
Display Menu ထဲက Screen ခေါင်းစဉ်အောက်မှာ Video Memory ဆိုတဲ့နေရာမှာ 128 ထိ အကုန်သာ ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးသွားရင် OK ကိုသာ နှိပ်လိုက်။ Start ကို လုံးဝ မလုပ်ပါနဲ့ဦး။
Mac OS X install ရာမှာ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် Terminal ကနေ ရိုက်ထည့်ရမယ့် Command တွေ ရှိပါသေးတယ်။ Linux မှာဆိုရင်တော့ Terminal ပေါ့။ Windows သမားတွေကတော့ cmd ကနေ တစ်ဆင့်စီ VirtualBox install ထားတဲ့ထဲထိ ဝင်ထားဖို့ လိုပါမယ်။ Linux သမားတွေတော့ မလိုပါ။
Linux သုံးသူတွေကတော့ အောက်ပါ စာကြောင်း တစ်ကြောင်းစီကို Terminal ဖွင့်ပြီး ရိုက်ထည့်ပါ။
ရိုက်မထည့်ရအောင် ကူးထည့်လို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်။ ကူးထည့်တာ ပိုမြန်ပြီး ပိုမှန်တာပေါ့ 🙋😄😄 တကယ်လို့များ မိတ်ဆွေက Mac OS X လို့ နာမည်မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် ပြင်ကို ပြင်ကူးရမှာနော်။
မျက်တောင် အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာ VirtualBox မှာ new လုပ်ခဲ့တုန်းက နာမည်အတိုင်း အကြီးအသေး နဲ့ space မှာ မလွဲအောင် ပြောင်းထည့်ရမယ်နော်။
ကူးထည့်တဲ့အခါမှာလည်း မလိုတာတွေပါ ကူးမသွားကြနဲ့နော်။ # လုံးဝ မပါသွားစေနဲ့။ # နောက်ကပဲ ကူးထည့်ကြပါ။ အချို့က အကုန်ကူးတာ 😬😬
Virtual Box မှာ ဖန်တီးထားတဲ့ Mac OS X လေးကို Start နှိပ်ပြီး စတင်နိုင်ပါပြီ။ ...........
Install လုပ်တဲ့အဆင့်တွေကတော့ လုံးဝ မခက်တာမို့လို့ ပုံတွေများပြီး loading ကြာမှာစိုးတဲ့အတွက် ထည့်မပြတော့ပါဘူးဗျာ။
အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် .........
Windows သမားတွေအတွက်လည်း command တွေ လိုပါတယ်။
ပုံတွေနဲ့ မပြတော့ဘူးနော် စာနဲ့ပဲ ပေးလိုက်ပါမယ်။
ပထမဆုံး My computer (This PC) ကိုဖွင့် C:\_Program Files\_Oracle\_VirtualBox\_ ထိ အဆင့်ဆင့် ဖွင့်ဝင်ထားပါ။ ပြီးရင် လွတ်တဲ့နေရာမှာ Shift + R-click နှိပ်ပြီး open command windows here ထင်တယ် (မေ့နေလို့) အဲဒါနှိပ်လိုက်တာနဲ့ cmd ပွင့်လာပါမယ်ဗျာ။
ပွင့်လာပြီဆိုတာနဲ့ အောက်ပါအတိုင်း တစ်ကြောင်းစီသာ ထည့်လိုက်ပါ။ တစ်ကြောင်းနဲ့ တစ်ကြောင်းကြား ချဲထားတဲ့အတွက် အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဗျနော .........
နောက်ပြီး Your Virtual Machine Name ဆိုတဲ့နေရာမှာလည်း VirtualBox မှာ တင်ခဲ့တဲ့ နာမည် ထည့်ကြဦးဗျနော .........
အားလုံး ပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ ..........
By KhitMinnyo on August 12, 2018
Labels: Hacking Lab, Kali, Windows
SoeLinnHtike April 17, 2019 at 4:35 AM
ဆရာ အဆင်ပြေရင် Linkပြန်ပေးပါဦးဆရာ